Fahitana razana :: Vehivavy, 75 taona, nisy namono tany an-tsaha • AoRaha
Fahitana razana Vehivavy, 75 taona, nisy namono tany an-tsaha
Novonoin’olon-tsy fantatra ny vehivavy iray, 75 taona, tany Atembotra kaominina Antanifotsy, afak’omaly maraina. Hita tany an-tsaha ny vatana mangatsiakany.
Naratra sy nisy diana zava-maranitra ny handriny. Tapatapaka toy ny novelesina tamin’ny hazobe ny taolan-tanany havia, araka ny fizahana nataon’ny mpitandro filaminana. Milaza ho mahafantatra olona ahiahiana tamin’ity vono olona ity ny fianakavian’ilay vehivavy lehibe. Mbola manao ny fanadihadiana kosa ny polisy. Tsy mbola nisy anefa hatreto ny olona nosamborina sy notazonina.
Nitondra mpiasa hanao raharaha any an-tsaha no nivoahan’ity zokiolona tao an-trano, tamin’io marainan’ny alarobia io. Nandeha irery niverina namonjy fodiana izy, taorian’izay, no niharam-boina teny an-dalana. Tsy nisy nahita ny zava-niseho.
“Tany an-tampon-tanety, iray kilaometatra mahery miala ny tanàna, no namonoana an’ilay zokiolona. Olona nandalo no nahita ny vatana mangatsiaka nihoson-dra teo amoron-dalana. Tsy fantatra ny zava-maranitra nanaperana ny ain’io vehivavy io. Tsy nisy voakitika fa mbola teny aminy ny akanjony rehetra”, araka ny angom-baovao nataon’ny polisy.
Natolotra ny fianakaviana ny razana, taorian’ny fizahana nataon’ny polisy sy ny mpitsabo. Tsy mbola fantatra mazava ny antony namoana an’ity vehivavy lehibe ity na mety ho vono niniana natao noho ny antony manokana.
Tsimok’aretina coronavirus :: Olona efatra naiditra hopitaly noho ny ahiahy
Zava-madomelina :: Vehivavy roa nahatrarana toaka nafangaro rongony